Waba yini lihlotshaniswa igama elithi "usomabhizinisi"? Ibhizinisi, ukuhweba, yokuthengisa, kwezamabhizinisi, ngisho ukufunisela. Kunjalo: osomabhizinisi - kuba ngomqondo ovamile abantu ababehileleke ekuhwebeni. Kodwa ingabe lokhu kusho ukuthi ungabiza noma yimuphi umsebenzi kulo mkhakha kusukela usomabhizinisi ngakunye yokuthengisa umsizi? Ingabe ikhona i-profession enjalo lapho wayesifundisa?
A emkhakheni ethile
Uma ngezikhathi Soviet kwakukhona esihlanganisiwe umsebenzi inkomba, manje kuphela ezinye izikhundla musa zibheda. Nokho, omunye sekunzima ukuthola umuntu ngokusemthethweni usomabhizinisi ukusebenza futhi kulotshiwe ibhuku lakhe.
Ngaphandle kwalokho, abantu waseRussia, yake eSoviet engavela leli gama akulona izinhlangano ezimnandi kakhulu. Uma abadayisi ngokuthi befisa ukuthola inzuzo, okwakucatshangwa ukuthi akhohlise yizakhamuzi ezithembekile.
Nokho, ikhethelo Nokho, ngemva kokufunda diploma nokubhala ukuthi umuntu okufanelekela "umthengisi" ukhona. Ngokwe-National Ukwahlukanisa, kuba umkhakha-commerce (ikhodi 080302) kanye nokuhweba ibhizinisi (080301). Kuyiqiniso esimweni sesibili ziqu of Diploma Kuzwakala kuyisixazululo "Uchwepheshe yokuthengisela!".
Uma igama akunandaba, sokuthuthukisa mkhakha kufanele kube okuhle, Faculty of Management, Economics, futhi merchandising.
Bephikisana ngokuthi ubani ungusomabhizinisi, kufanele kuphawulwe ukuthi kuya kuba indlela yokuphila kunokuba ubuthishela. Ngomqondo obanzi, ngakho ungabiza noma ubani ngenhloso wathenga khona into eshibhile bese uthengise ezibizayo. I abaseduze elifanayo yesimanje - "usomabhizinisi." abanikazi bamabhizinisi akumelwe kuphela ukuthengisa nilidle amakhono zokuphatha, ukumaketha kanye umphathi izimpahla ngesikhathi esifanayo.
onguchwepheshe ezinjalo kumele akwazi ukuhlela phila inqubo yokuthengisa, umkhiqizo ukukhuthazwa kwemakethe, umkhiqizo marketing, ukukhethwa umkhiqizo uhla, ukuphathwa yokusungula, ukuhlaziya imiphumela.
Izicelo lamakhono nhlobonhlobo. Umnini-sitolo ingasebenza njengomphathi yokuthengisa, onguchwepheshe ukukhangisa, marketer, logistician, wamathikithi, inhloko yabangamashumi Amasimu abafanele, nokunye. D. umsebenzi akuyona kuphela ezithakazelisayo, kodwa futhi imali. Ngokuvamile iholo "prodazhnika" kuhlobane ngokuqondile umphumela: izimpahla ithengiswe, ayanda engenayo.
Manje, lapho sekungenzeka kancane sobala ngubani umthengisi, ake sithole ukuthi zonke ehlombe lo msebenzi.
Ziningi yokuthengisa ngempumelelo amasu. Izinkampani ezinkulu bayatfutfuka kwezikripthi zabo ukuphathwa - imibhalo, echaza ngokuningiliziwe indlela isithakazelo ikhasimende ukukukhuthaza ukuba wenze ukuthenga. Konke lokhu kungafundwa futhi abanye master ngokwezinga.
Nokho, ngaphandle izici ezithile ukusebenza kule ndawo iyoba okungabekezeleleki. Ngokwesibonelo, ezingavamile umphathi yokuthengisa ihlala buthule ehhovisi kusukela abayisishiyagalolunye eziyisithupha, buthule ephuza itiye. Kufanele kube umuntu mobile futhi kulula ukuya.
-Merchant akhawunti khumbula izinto eziningi ngesikhathi esisodwa, ngakho-ke kudingeka uhlanganiswe, abe nenkumbulo enhle yesikhathi esifushane neyezinto bakwazi ukuba enze izinqumo ngokushesha.
Futhi, ngezinye izikhathi umthengisi has ukubhekana amaklayenti nzima futhi ukuthengiselana ngezikhathi ikhefu. Kubalulekile ukuba imizwa eqinile futhi sibe nethemba. Usomabhizinisi Novice abanakukwazi give up at kokuhluleka kokuqala. Kufanele siphikelele futhi unenjongo, futhi noma impumelelo kule ndawo akuyona izuzwe.
Uma ungeke, kodwa ufuna ngempela
Kulokhu osekushiwo, kuyacaca ukuthi impilo engeyinhle kanye ukukhathala ukusebenza yomthengisi akunakwenzeka ukuba aphumelele.
Uma ungathandi ukuba basebenzisane njalo ezindabeni zebhizinisi nabantu abanenkinga zokuxhumana futhi ngokulambisa abangane abasha, khona-ke iyoba yomthengisi eziyinkinga.
Ngakolunye uhlangothi, uma ungazi futhi ungafuni ukuthengisa, akusho ukuthi indlela kulolu hlaka ode. Nayo ngenhla mayelana nokuthi ubani ungusomabhizinisi, sishilo lezimpahla abacwaningi kanye abakhangisi. Nalokhu futhi, ngomqondo, abathengisi, futhi zihlobene yokuhwebelana, kodwa ngqo inqubo nokudayisa azisetshenziswa. A abadayisi ku Forex emakethe usebenzelana kuphela yokuthi nokudayisa, kodwa akudingeki ukuba sizulazule edolobheni futhi uhlanganyele nabantu.
Ingabe ufuna ukushintsha wena ube umdayisi ezinhle, naphezu kwamaphutha ezibucayi? Funda ukuthengisa. Kwenze ngaso sonke isikhathi. Daily uthenjwe esibukweni noma yiziphi izinto ukuthi ubanjwe iso lami. Khuthaza abangani ngombono wakhe (hhayi ukuphoqelela, ukuhlukanisa imiqondo le). Ekugcineni, ukunikeza impendulo brilliant yombuzo ecasulayo kakhulu kule interview: "Kungani kufanele ukhethe wena"
Lapha thina sikanye nawe futhi uthole ngubani lo somabhizinisi futhi onendlu ithuba lokuba omunye. Zama, konke kusenjalo kungcono ucingo lwakho!